Ngelishwa, nayiphi na intsholongwane ingabamba ubanda. Kwaye abafazi abakhulelweyo abafani. Emva kwakho konke, ukukhulelwa nangayiphi na imeko kubamba ubuncinane amabini amaxesha "ebanda" konyaka - ebusika, entwasahlobo okanye ekwindla. Kule mihla, iintsholongwane zentsholongwane zivela rhoqo. Ewe, kulungile ukuba unako ukukhusela izifo ezinokwenzeka.
Ukuba akunjalo, kwaye unayo i-ARVI? Qala ukulwa nesifo!
Mhlawumbi, ngaphambi kokukhulelwa ujwayele ukuthwala isifo ezinyaweni zakho, kodwa ngoku oku akuvumelekanga kwimeko yakho! Cinga ngako: umzimba wakho sele unomthwalo ophindwe kabini, kwaye ke kukho kubanda. Kukho apho kubonakala ukukhathala nokunyaniseka, ukunyanzelwa kwegazi. Ukongezelela, ukuthwala isifo ezinyaweni zakho, kwaye kungekhona embhedeni, njengoko kulindelwe, ubeka ingozi yokuxhalabisa. Ngoko musa ukudlala ngomlilo!
Ukuba usebenza - ngokukhawuleza uthathe ikhefu lokugula, ukuba awuyikuhlehlisela - ixesha lokuhlaselwa kwezifo zonke zasekhaya nakwezinye iimeko. Ngoku kubaluleke kakhulu ukuba ulale. Musa nje ukucela ugqirha ukuba anike amachiza kuwe kangangoko kunokwenzeka ukuze ulunge ngokukhawuleza. Ungakulibala ukuba unamandla kakhulu, ukuba nemiphumo emibi ingabangela. Ukongezelela, abazange baqulunqe izidakamizwa eziya kubavumela ukuba baphiliswe ngexesha elinye. Kwi-ARVI, nakweyiphi na imeko, iintsuku eziliqela kufuneka zidlule ngaphambi kokuba iqondo lokushisa lihlawule, ukukhwehlela, impumlo, imfosane kunye nezinye iimpawu ezingathandekiyo ziye zaphela.
Ngoku into enqwenelekayo kuwe kukusetyenziswa kweziza-antibiotics. Ewe, ayifuni kwi-ARVI, kuba iigciwane azisebenzisayo. Bathetha kubo kuphela kwiimeko ezinzima.
Ngokuqhelekileyo, malunga nokwamkelwa kwanaluphi na uhlobo lweyeza-ngaphambi kokuba ulisebenzise, ​​funda ngokucacileyo isichaso, nokuba ngaba kungenzeka ukusebenzisa le mayeza kumama ozayo. Ukunyamekela ngokukhethekileyo kwaye uqaphele ukuba ufanele ukuba ukuba ixesha lokuthoba lifikelela kwiiveki ezili-12. Kulo thuba apho umntwana ubeka zonke iinkqubo kunye nezitho, kwaye impembelelo yanoma yimuphi umalungiselelo awunqwenelekayo.
Kukho iziphakamiso eziliqela ukusuka kwinqanaba elithi "uncedo lokuqala" kunye nemiqondiso yokuqala yokubanda.
1. Ngokukhawuleza xa uziva ukuba uqala ukugula, unobungozi emqaleni, ukuqala kwempumlo yeempumlo, ukuqala ubuthathaka, njl., - qalisa ukusebenzisa rhoqo iziphuzo ezifudumeleyo. Eyona nto ingcono kakhulu, ukuba i-infusion yamagatsha namaqabunga e-raspberry, itiye kunye nama-raspberries okanye i-lemon, ubisi kunye nobusi.
2. Yitshintshela ekukhanyeni, ekukhaleni kwekhalori. Umzimba ngoku kufuneka uqondise yonke imikhosi engekho ekutyeni ukutya, kunye nomzabalazo wokugula.
3. Ukuba i-Pershit isemqaleni, kuba lula ukunyathela iinqom lemon ngaphandle (!) Ushukela.
4. Ukunciphisa ukusebenzisa ityuwa ukuya phezulu. Kuyinto efanelekileyo ukubonakala kwe-edema, kwaye, kwakhona, yandisa ukwanda kwempumlo.
5. Sika i-garlic efanelekileyo kunye no-anyanisi, uwafake kwiiplate kwaye ulungiselele kuyo yonke indawo. Oku akusiyo kuphela isisombululo seqanda eliqhelekileyo, linceda ekunciphiseni amathuba okuba abanye abantu kwintsapho.
6. Ngentlungu entanyeni, akukho nto ingcono kunokugqithisa. Eyona nto ingcono kakhulu kule njongo i-decoctions ye-eucalyptus, sage, chamomile, calendula, i-oak bark. Isisombululo esihle kakhulu se-1 tsp sinceda. soda, 1 ithispoon ityuwa kunye nama-drops e-iodine.
7. Ukuqhwala kuya kunceda ukuphuza umbane kunye neoli efunekayo ye-dog rose, i-eucalyptus, i-chamomile, i-thyme. Ungasebenzisa i-inhaler ekhethekileyo, okanye unokusila iibhotile ezimbalwa zeoli efunekayo ebhodweni lamanzi abilayo, ukuguqa phezu kwayo, egubuzele ngeshekhi. Uze uphuze umphunga wokuphulukisa.
8. Ukunciphisa izinga lokushisa, zama ukusebenzisa i-wraps ezimanzi. Gcoba umgca wengubo yangokwemvelo ngamanzi kwiqondo lokushisa lokushisa, udibanise kakuhle. Emva koko wambethe unqamle, bhinqa kule shidi uze ulale, ufihle phezulu ngenqwebo elifudumeleyo.
Indlela yokukhulelwa ngamawele ngamvelo
I-Calanetics yabamama abalindayo
Inkukhu kwiimbiza kunye nemifuno
Isonka esityiweyo kunye noshizi kunye nemifino
Iidlela zokuhle ezivela kumazwe ahlukeneyo
Ukutyhala kwamanzi amazinyo
Iingcebiso ezifanelekileyo zokuziphatha kwiimeko ezinzima
Isaladi kunye ne-avocado kunye ne-salmon
Amancinci amancinci okanye indlela yokufunda ukugcina imali
Anatoly Papanov, i-biography kunye neminyaka yobomi